१३९ वर्षपछि प्रथम सहिद लखन थापा
सन् १९१४ मा भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा अंग्रेज शासनविरुद्ध सैनिकले ठूलो विद्रोह गर्यो। त्यसलाई दबाउन र अंग्रेजलाई सहयोग गर्न जंगबहादुरको नेतृत्वमा २५ नेपाली पल्टनसहित पुरानो गोरखगणका लखन थापामगर, जयसिं चुमी रानामगर,
एक्ला किसानको तरकारी खेतीमा करोड लगानी
धादिङ । व्यवसायीक तरकारी खेतीमा धादिङ जिल्लामै गनिएका ३८ वर्षिय कृष्णकुमार रेग्मी करोड लगानी गरेर तरकारी खेती गर्ने नमुना कृषक हुन् । १५ वर्ष यता सामान्य खेतीपाती गर्दै आम्दानी बढाउँदै
आजदेखी टाटाको एक्सचेन्ज फेस्टिभल
काठमाडौँ । टाटा गाडीहरुको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.ले आजदेखि एक्सचेन्ज फेस्टिभलको शुरुवात गर्ने भएको छ । देशका विभिन्न शहरमा टाटाका गाडीहरुको एक्सचेञ्ज गर्न चाहने ग्राहकहरुका लागि
कृष्णहरि बाँस्कोटा राजा भएको दिन …
कुरो २०५० सालको हो । म त्यतिबेला अछामको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) थिएँ । उतीबेलाको सम्झना गर्दै कृष्णहरि बास्कोटा सुनाउँछन् ʽसिडिओ बनेको त्यो बेला जीवनमा भुल्नै नसकिने केहि घटना भए
नेपाल आयल निगमले भोलीदेखि दुईपांग्रेलाई पेट्रोल वितरण गर्ने
माघ ५, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बुधबार देखि लटका आधारमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । निगमले सोमबार सूचना जारी गर्दै मंसिर ६ गते बुधबारदेखि दुई
माघीको दिन पारेर धेरै पटक लिलामीमा चढें : शान्ता चौधरी
शान्ता चौधरी । मेरो एउटा उमेर थियो, विगतका दिनहरु थिए त्यसबेला माघी आउँदा असाध्यै खुसी भइन्थ्यो । यसकारण पनि खुसी भइन्थ्यो कि आँशु बिर्सन सकियोस् । थारु समुदायको सबैभन्दा ठूलो चाड
चन्द्रागिरिमा केबुलकार एक महिना भित्रै (भिडियो सहित)
काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यकावासीको काठमाडौंवरपर नै केबुलकार चढ्ने रहर अब चाँडै पूरा हुने भएको छ। काठमाडौं फनपार्क प्रालिले चन्द्रागिरि डाँडामा पुग्नेगरी निर्माण थालेको केबुलकारको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको छ। भ्यु
विश्व चर्चित महिलाको सूचीमा ‘राष्ट्रपति भण्डारी’
काठमाडौं । ‘फोब्स म्यागेजिन’ले सार्वजनिक गरेको यस वर्षका विश्व चर्चित महिलाहरूको सूचीमा नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि परेकी छन् । फोब्सको सूचीमा पर्ने उनी पहिलो महिला व्यक्तित्व पनि
तेक्वान्दोमा आयशासहित तीन छनोट
काठमाडौं- रजत पदक लक्ष्य राखेको नेपाली भलिबलले २५ वर्षपछि विदेशी प्रशिक्षकको नेतृत्वमा सागको तयारी गरिरहेको छ। चीनका रोङले भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भएको सागमा भलिबल टोलीलाई प्रशिक्षण गराएका थिए। अहिले
नाकाबन्दीले दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मूल्यवृद्धि दुई वर्षपछि दोहोरो अंकमा पुगेको छ। राष्ट्रबैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिअनुसार कात्तिकमा मूल्यवृद्धि १०.४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७० कात्तिकमा मूल्यवृद्धि १०
सिटिजन्स लाइफले आइपीओ जारी गर्ने
सेयरधनीलाई पौने तीन अर्ब बोनस बाड्ने नेप्सेमा सुचिकृत यी १३ कम्पनी, हेर्नुहास् ! कसको कति? (सुचिसहित)
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउनयता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा सुचिकृत भएका
नेपाल प्रहरीमा एसएसपीदेखि जवानसम्म्म ठुलो संख्यामा जागिर खुल्दै
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३ हजार ६ सय दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको छ
दशैँ नजिक आयल निगमले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य घटायो (मूल्य सुचिसहित)
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमले
भर्खरै प्रकाशन गर्यो शिक्षक सेवा आयोगले थप जिल्लाका प्रावि तहको नतिजा